"Oothixo baseMelika." Umsebenzi wobugcisa wombhali uNeil Gaiman. | Uncwadi lwangoku
"Oothixo baseMelika." Umsebenzi wobugcisa wombhali uNeil Gaiman.
M. Ukhwekhwe | | Inoveli
Kwenzeka ntoni koothixo beLizwe eliDala xa bezibona bengathembekanga, bebodwa kwaye bengenakuzenzela nto kwilizwekazi elingaqhelekanga kubo? Lo mbuzo ngulowo ubuziweyo Neil Gaiman kwaye yayiyimvelaphi yakhe owona msebenzi mkhulu: American Thixo. Inoveli ebeka iingcambu zayo kwiintsomi zokuqala ukuzilungisa, kodwa kwangaxeshanye ihloniphe ukuthembeka kwazo.
1 Indoda eyintsomi
2 Umcimbi wesini
3 Ibali loothixo kunye namadoda
Umkhondo we-british UGaiman ayinakulinganiswa nanto njengoko inika umdla. Xa wayesebenza njenge ntatheli wenza udliwanondlebe UAllan moore (Lidume emhlabeni kwinoveli graphic ezifana v yeVendetta o Balindi), eyaphinda yavuselela umdla wakhe kwiimidlalo ezihlekisayo. Ngenxa yobuhlobo phakathi kwaba babini, uGaiman waqala umsebenzi wakhe njengombhali wenqaku elihlekisayo ngemisebenzi efana nale I-orchid emnyama y I-Sandman. Olu luhlu lokugqibela lolunye athe wazuza ngalo ngexesha le-90s, de wafikelela kwinqanaba lokuba ngumbhali wehlelo.
Nangona waye wakhulisa nengxelo yemveli ngakumbi kule minyaka ilishumi, yayihlala ibambisene nabanye ababhali (njengakwi Imimangaliso, ecaleni kwe UTerry Pratchett) okanye ukwenza inoveli ngokwakho okanye iincwadi zeempendulo zikamabonakude (Akukho ndawo y Stardust). Kwafuneka silinde de kube sekuqalekeni kwenkulungwane yama-XNUMX ukuze sifunde Iimerika zaseMelika (2001), indalo yakhe yokuqala yakhulelwa kwasekuqaleni njengenoveli. Kuyo, uGaiman uzisa ndawonye zonke ezo zinto zazimkhathaza ebomini bakhe, ezazibonakalisa ukuba ngumsebenzi onomdla.
Iimerika zaseMelika ubalisa ibali lika Inyanga yeShadow, othi emva kweminyaka emithathu enetyala ashiye ijele aye emngcwabeni womfazi wakhe laura, kutshanje usweleke kwingozi yemoto nomhlobo wakhe osenyongweni. Endleleni ebuyela kwikhaya lakhe lakudala udibana ne «Mnumzana ngolwesithathu»(Ngolwesithathu), omnika umsebenzi wokuba ngumlindi. Ukusukela ngoko ukuya phambili, uSombra, umntu oqinisekileyo ukuba uyathandabuza, ufumanisa ukuba emva kwenyani ebonakalayo kukho enye, kwaye neentsomi zikhona ezijikeleze ikona.
Uqweqwe lohlelo lweRoca Pocket.
Incwadana idibanisa zonke iintlobo zezinto ezingafaniyo. Libali le umbono kwaye kwangaxeshanye a Thriller, iakhawunti ye intsomi yesayensi, Kwaye a incwadi yokuhamba. Le yeyona ngxaki inkulu bajongana nayo xa behlalutya Iimerika zaseMelika, njengoko kungenakwenzeka ukuyifaka. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka siqonde ukuba uGaiman akayithathi into yokuba uncwadi lungamacandelo avaliweyo. Umbhali omnye wathi ngayo:
Xa ndinam kuphela njengomfundi wokuqala, isini, okanye ukungabikho kwesini, iba yinto engabalulekanga. Umgaqo kuphela onokuthi undikhokele njengombhali kukuqhubeka uqhubele phambili, kwaye uqhubeke ubalisa ibali elingenzi ukuba mna, umfundi wam wokuqala, ndizive ndikhohlisiwe okanye ndidanile ekugqibeleni.
Ngale ndlela, Iimerika zaseMelika Yiyo Umsebenzi wezinto ezichaseneyo. Kwaye oku, kude kube yinto engalunganga, kuyinika uphawu lwayo ezinye iincwadi ezinokufuna kuphela. Umdlalo weqonga kunye nokuhlekisa, intelekelelo kunye nenyani iyanxibelelana phakathi kwamaphepha ayo wokuluka ibali elibamba umfundi.
Ibali loothixo kunye namadoda
-Uyintoni? Ubuzile uShadow. Niyintoni nonke?
I-Bastet izamisiwe, ibonisa ulwimi olumnyama olupinki.
"Ucinga ukuba singumqondiso; siphupha ukuba ubuntu budala ukwenza ingqiqo yezithunzi kwiindonga zomqolomba. Ngoku ke hamba; Umzimba wakho uyagodola. Abantu abaphambeneyo bahlanganisene entabeni. Ixesha lifutshane.
Iimerika zaseMelika Ayizontlalontle zomntu owayesakuba libanjwa. Yi intsomi yanamhlanje loo nto yenziwe ngaphakathi kwento yangoku I-neo-fantastic, owazalwa njengesiphumo sokudinwa kohlobo, oluchasene nokuhlelwa ngokwendabuko kwefantasy ngu-theorist Todorov. Ngumzabalazo wamandla e-US phakathi kwe Oothixo bamandulo (isilumko, indala, ihlwempu kunye ne-decadent) kunye oothixo abatsha (abangenalwazi, abatsha, abazizityebi nabanamandla), abenza ubumbano lwehlabathi, i-Intanethi kunye nexesha lasemva kwexesha. Olu ngquzulwano lunezandi zentsomi ezisikhumbuza ngeGigantomachy yentsomi yamaGrike, okanye iimfazwe phakathi kuka-irsir noVanir wentsomi yaseNorse.
Nangona kunjalo, ungavumeli le mvelaphi ityebileyo isilahlekise. Kuyinyani ukuba Iimerika zaseMelika ine-subtext enokufunyanwa ngumfundi osisilumko, kodwa ayisiyonto ifunekayo yokonwabela umsebenzi. Isakhiwo, ngokwawo, sinomdla, ngokwahlukileyo iyelenqe lijijeke y abalinganiswa abakheke kakuhle Kulula ukubavelana naye. Kuzo zonke ezi zizathu, ndincoma ukufunda eli bali loothixo nabantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » "Oothixo baseMelika." Ingqungquthela yomsebenzi wombhali uNeil Gaiman.
Usuku lokubhiyozela ootata. Izihloko ezi-6 zabo bonke abazali kunye nabazali